Yini iSwan Swan? Sichaza umcimbi we-Black Swan. - Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Yini iSwan Swan? Sichaza umcimbi we-Black Swan.
I-Black Swan, i-Black Swan, Funda i-Cryptocurrensets
Tag: Black Swan, I-Swan Emnyama, UTaleb
Isikhathi sokufunda: <1 umzuzu
Umcimbi weBlack Swan, ngesimo sawo esilula, umcimbi oza njengokumangazayo futhi onomphumela obalulekile, obalulekile.
Umlando weTheory Swan Theory - noma iThe Black Swan Theory of Events - isukela enkulumweni yesiLatini yekhulu lesi-XNUMX yimbongi yaseRoma uJuvenal, lapho izofaka into efana nale:
I-Rara avis in terris nigroque simillima cygno
Singahumusha lesi sisho sesiLatini siye ku: "inyoni engajwayelekile ifana kakhulu nenkukhu emnyama". Ekuqaleni, ngenkathi le nkulumo isetshenziswa okokuqala, ama-swans amnyama kwakucatshangwa ukuthi awekho.
Umbono weBlack Swan waphinde wasungulwa yisazi sezibalo kanye nomhwebi uNassim Nicholas Taleb. Ngo-2007 washicilela incwadi ebizwa ngokuthi IBlack Swan: Umthelela Wokungenzeki Kakhulu, eyayichaza futhi yenza ngokomthetho umbono weBlack Swan.Nasi isixhumanisi sokuyithola ku-Amazon: LINK. Qaphela, ngaphandle kokudluliselwa!
Ngokusho kukaTaleb, imicimbi yeBlack Swan ngokuvamile ilandela izimfanelo ezintathu:
I-Swan Emnyama kuyinto engathandeki. Kungaphezu kokulindelwe njalo, futhi ngenxa yalokho, akukho okwedlule obekungakubikezela.
Uhlale njalo umthelela owedlulele noma okuphawulekayo.
Umcimbi weBlack Swan, yize ungalindelekile, ngokuqinisekile uzoba nesizathu esasungulwa ngemuva kokuvela kwawo okokuqala, okwenza lolo hlobo lomcimbi lucace futhi lubikezelwe.
Izibonelo zezehlakalo ezedlule zeBlack Swan, njengoba kuchazwe nguTaleb, ukwenyuka kwe-intanethi, ikhompyutha yomuntu siqu, ukuqedwa kweSoviet Union, kanye nokuhlaselwa kukaSepthemba 11, 2001.
Izinhlelo ezihlanganisiwe kanye nendawo eyodwa